သတင်း - အခြေခံမေ့ဆေးစောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာစံများ
မူလအစကော်မတီ: စံများနှင့်အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ (ကိုယ်စားလှယ်များ ASA House မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၀ တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးအတည်ပြုခဲ့သည်)
ဤစံနှုန်းများသည်မေ့ဆေးစောင့်ရှောက်မှုအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်သင့်လျော်သောအသက်ကယ်အထောက်အကူပြုအစီအမံများက ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ တာဝန်ရှိမေ့ဆေးဆရာဝန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ဤစံနှုန်းများသည်အချိန်မရွေးကျော်လွန်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောလူနာစောင့်ရှောက်မှုကိုအားပေးရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း၎င်းတို့အားကြည့်ရှုခြင်းသည်မည်သည့်တိကျသောလူနာရလဒ်ကိုမှအာမမခံနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်နည်းပညာနှင့်အလေ့အကျင့်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှအာမခံထားသည့်အတိုင်းအချိန်နှင့်တပြေးညီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်မေ့ဆေး၊ ဒေသထုံဆေးနှင့်မေ့ဆေးစောင့်ကြည့်စောင့်ရှောက်မှုအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်များသည်မေ့ဆေးစောင့်ရှောက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောအခြေခံမေ့ဆေးစောင့်ကြည့်မှုပြဿနာကိုသာဖြေရှင်းသည်။ အချို့ရှားပါးသောသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများတွင် ၁) ဤစောင့်ကြည့်မှုနည်းလမ်းအချို့သည်လက်တွေ့အားဖြင့်လက်တွေ့မကျနိုင်ဘဲဖြစ်နိုင်ပြီး ၂) ဖော်ပြထားသောစောင့်ကြည့်နည်းလမ်းများကိုသင့်တော်သောအသုံးပြုခြင်းသည်လက်တွေ့တိုးတက်မှုများကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၏အနှောင့်အယှက်များသည် ရှောင်လွှဲ၍ မရပေ။ ဤစံနှုန်းများသည်သားဖွားလူနာအားပြုစုရန်သို့မဟုတ်နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကျင့်စဉ်၌အသုံးချရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
1. စံ I
အရည်အချင်းပြည့်မီသောမေ့ဆေးဆရာ ၀ န်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မေ့ဆေး၊ ဒေသထုံဆေးနှင့်စောင့်ကြည့်မေ့ဆေးစောင့်ရှောက်မှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ရှိနေရမည်။
၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် -
မေ့ဆေးကာလအတွင်းလူနာအခြေအနေလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောမေ့ဆေးဆရာ ၀ န်များသည်လူနာအားစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်မေ့ဆေးပေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေလိမ့်မည်။ အဖြစ်အပျက်တွင်မေ့ဆေးသို့တိုက်ရိုက်သိသောအန္တရာယ် (ဥပမာဓါတ်ရောင်ခြည်) သည်မေ့ဆေးတွင်ရှိသည်
လူနာအားအဆက်မပြတ်အဝေးမှကြည့်ရှုရန်လိုအပ်နိုင်သည့်လူနာများ၊ လူနာအားစောင့်ကြည့်ရန်အချို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုပြုလုပ်ရမည်။ အရေးပေါ်ထုံဆေးအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်၏ယာယီမရှိခြင်းလိုအပ်သောအခြေအနေတွင် the
2. စံ II
မေ့ဆေးအားလုံးတွင်လူနာ၏အောက်ဆီဂျင်၊ လေ ၀ င်လေထွက်၊ လည်ပတ်မှုနှင့်အပူချိန်ကိုအမြဲအကဲဖြတ်ရမည်။
၂.၁.၁ ရည်ရွယ်ချက် -
၂.၂ နည်းလမ်းများ -
၂.၂.၁ မှုတ်သွင်းခံဓာတ်ငွေ့ - မေ့ဆေးသုံးပြီးယေဘူယျအားဖြင့်မေ့ဆေးစီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းတွင်လူနာအသက်ရှုစနစ်၌အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကိုအောက်ဆီဂျင်အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသောနှိုးဆော်ချက်ဖြင့်အောက်စီဂျင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်တိုင်းတာရပါမည်။
၂.၂.၂ သွေးအောက်ဆီဂျင်: မေ့ဆေးအားလုံးတွင် pulse oximetry ကဲ့သို့သောအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအကဲဖြတ်သည့်ပမာဏနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရမည်။ မေ့ဆေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းများ။* လူနာအားလုံလောက်သောအလင်းရောင်ရရှိမှုနှင့်ထိတွေ့မှုလိုအပ်သည်။
၃.၁ ရည်ရွယ်ချက် - မေ့ဆေးအားလုံးတွင်လူနာအားလုံလောက်သောလေ ၀ င်လေထွက်ရှိစေရန်။
၃.၂ နည်းလမ်းများ -
၃.၂.၁ အထွေထွေမေ့ဆေးကိုရရှိသောလူနာတိုင်းသည်လေ ၀ င်လေထွက်လုံလောက်မှုကိုအမြဲအကဲဖြတ်ရပါမည်။ ရင်ဘတ်အပျော်ခရီးထွက်ခြင်း၊ ရေလှောင်အိတ်အသက်ရှူအိတ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသက်ရှုသံကိုစူးစိုက်ခြင်းကဲ့သို့အရည်အသွေးရှိသောလက်တွေ့လက္ခဏာများသည်အသုံးဝင်သည်။ လူနာ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို့) စက်ပစ္စည်း၏သဘောသဘာဝအရအကျုံးမ ၀ င်ပါကသက်တမ်းကုန်နေသောကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှိနေခြင်းကိုအမြဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရလိမ့်မည်။
၃.၂.၂ endotracheal tube သို့မဟုတ် laryngeal mask ကိုထည့်လိုက်သောအခါ၎င်း၏မှန်ကန်သောတည်နေရာကိုလက်တွေ့အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းလွန်ဓာတ်ငွေ့တွင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်အတည်ပြုရပါမည်။ endotracheal tube/laryngeal mask နေရာချထားချိန် မှစ၍ extubation/ဖယ်ရှားရေးသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်မှုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်မီအထိ endotracheal tube/laryngeal mask နေရာချထားသည့် အချိန်မှစ၍ သုံး၍ အဆက်မပြတ် end-tidal ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပမာဏအတိုင်းအတာ၊ capnometry (သို့) mass spectroscopy ကဲ့သို့ပမာဏနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမည်။ *
capnography သို့မဟုတ် capnometry ကိုသုံးသောအခါအဆုံးဒီရေတက် CO2 နှိုးဆော်သံကိုမေ့ဆေးအထူးကု (သို့) မေ့ဆေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းများကကြားရလိမ့်မည်။
၃.၂.၃ လေ ၀ င်လေထွက်ကိုစက်မှအသက်ရှူစက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သောအခါအသက်ရှူစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းကိုထောက်လှမ်းနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုအမြဲရှိရမည်။ အချက်ပေးကိရိယာသည်၎င်း၏နှိုးဆော်သံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါကအသံဖြင့်အချက်ပြပေးရမည်။
၃.၂.၄ ဒေသဆိုင်ရာမေ့ဆေး (သက်တောင့်သက်သာမရှိသော) သို့မဟုတ်မေ့ဆေးမရှိသောဒေသန္တရထုံဆေးကာလအတွင်းလေ ၀ င်လေထွက်လုံလောက်မှုကိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့်လက္ခဏာများကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာအကဲဖြတ်ရမည်။ အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသော sedation အတွင်းလေ ၀ င်လေထွက်လုံလောက်မှုကိုလူနာ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (သို့) ကိရိယာ၏သဘောသဘာဝအရမတားမြစ်ဘဲ (သို့) ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုပါကလေ ၀ င်လေထွက်လုံလောက်မှုကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
၄.၁ ရည်ရွယ်ချက် - မေ့ဆေးအားလုံးတွင်လူနာ၏သွေးလည်ပတ်မှုလုံလောက်မှုရှိစေရန်။
၄.၂ နည်းလမ်းများ -
၄.၂.၁ မေ့ဆေးရရှိသောလူနာတိုင်းမေ့ဆေးသွင်းရန်ပြင်ဆင်ချိန်မတိုင်မီမေ့ဆေးကိုအစမှ electrocardiogram ရိုက်။ အဆက်မပြတ်ပြသရမည်။
၄.၂.၃ အထွေထွေမေ့ဆေးကိုလက်ခံသောလူနာတိုင်းတွင်အထက်ပါအချက်များအပြင်သွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခုအားအောက်ပါအတိုင်းအမြဲအကဲဖြတ်ရမည်။ သွေးခုန်နှုန်း palpation၊ နှလုံးခုန်သံကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းဖိအားဖိအားကိုခြေရာခံခြင်း၊ ultrasound အရံပစ္စည်း သွေးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်ခြင်း (သို့) သွေးခုန်နှုန်း
plethysmography သို့မဟုတ် oximetry
၅.၁ ရည်ရွယ်ချက် - မေ့ဆေးအားလုံးတွင်သင့်တော်သောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်ကူညီရန်။
၅.၂ နည်းလမ်းများ - မေ့ဆေးရရှိသောလူနာတိုင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားရန်ရည်ရွယ်ထားသည်၊ မျှော်မှန်းသည် (သို့) မသင်္ကာသောအခါအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရမည်။
†သတိပြုရန်မှာ“ အဆက်မပြတ်” ကို“ ပုံမှန်မှန်မှန်နှင့်မကြာခဏမှန်မှန်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီး“ စဉ်ဆက်မပြတ်” ဆိုသည်မှာ“ မည်သည့်အချိန်မဆိုအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲကြာရှည်သည်” ဟုဆိုလိုသည်။
* အားလျော့နေသောအခြေအနေများတွင်တာဝန်သိမေ့ဆေးဆရာဝန်ကကြယ်ပုံ (*) ဖြင့်အမှတ်အသားလိုအပ်ချက်များကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပြီးမြောက်သောအခါ၎င်းအားလူနာ၏ဆေးမှတ်တမ်းတွင်မှတ်စုတွင် (အကြောင်းအရင်းများအပါအဝင်) ဖော်ပြသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။